Ama-Perseids: ayini, uwabona kanjani futhi uyini umsuka wawo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wezwa ngeshawa semeteor esaziwa ngokuthi uyabekezela noma izinyembezi zikaSan Lorenzo. Yisihlambi semeteor esibonakala kumlaza wePerseus, yingakho igama laso, futhi linokubaluleka okukhulu phakathi kuka-Agasti 9 no-13. Ngalezi zinsuku ungabona inqwaba yemigqa ekhanyayo esibhakabhakeni sasebusuku, ehambelana nalokho okubizwa ngokuthi izihlambi zemeteor. Ingesinye sezihlambi zemeteor ezaziwa kakhulu emhlabeni futhi inamandla amakhulu kakhulu ngoba ingakhiqiza ama-meteor afinyelela kuma-80 ngehora noma ngaphezulu. Kumele kubhekelwe ukuthi indawo yezimo zezulu zomkhathi okwamanje ziyizici ezidingekayo zokuzijabulela ngokugcwele.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela zonke izici, imvelaphi nokuthi ungabona kanjani ama-Perseids.
2 Umsuka wamaPerseid
3 Ama-Comet kanye nama-Meteor Showers
4 Uwabona kanjani ama-Perseids
Kuyaziwa ukuthi unyaka wonke kunemvula ehlukahlukene yama-meteor ezindaweni ezahlukahlukene esibhakabhakeni. Kodwa-ke, amaPerseids yiwo abenokubaluleka okukhulu ngoba anezinga eliphakeme lama-meteor ngehora. Futhi, zenzeka phakathi nobusuku behlobo enyakatho Nenkabazwe, okwenza kujabulise kakhulu. Izihlambi zamazulu ezenzeka ngesikhathi sasebusika ziyinkimbinkimbi kakhulu kufanele. Okokuqala, ngenxa yamakhaza asebusuku angakuvumeli ukuba unethezeke ngenkathi ubuka imvula ye-meteor. Ngakolunye uhlangothi, sinezimo zezulu ezimbi. Ngesikhathi sasebusika maningi amathuba okuba kube nemvula, inkungu noma ukusibekela okuningi okungakuvumeli ukuthi ubone i-El Hierro kahle.
AmaPerseid ayaziwa amaShayina azungeze AD 36 Ngesinye isikhathi eNkathini Ephakathi, amaKatolika abhapathiza lezi zimvula ngegama lezinyembezi zikaSaint Lawrence. Ngokwemvelo kube nezimpikiswano ezithile mayelana nemvelaphi yalezi zinkanyezi njengoba zazivela ngezikhathi ezithile. Ukuvumelana okuqinile okujwayelekile ngalolu daba bekumane kuyizinto ezisemkhathini. Kodwa-ke, sekuvele ekuqaleni kwe- Ikhulu le-XIX ezinye izazi zezinkanyezi zazihlonza kahle njengezinto zasezulwini.
Imvula ye-meteor imvamisa ibizwa ngama-constellation abonakala evela kuwo. Lokhu kwesinye isikhathi kungadala iphutha kungenxa yomthelela ekubukeni. Eminye imvula ye-meteor ivame ukufana ne-trajectories yama-meteors. Lokhu kwenza kubonakale kumqapheli phansi ukuthi ziyahlangana endaweni ebizwa ngokuthi i-radiant.
Sesishilo ukuthi imvelaphi kwakunzima kakhulu ukuyazi. Kodwa-ke, phakathi neminyaka yokuqala yekhulu leshumi nesishiyagalolunye, abanye ososayensi abanjengo-Alexander von Humboldt no-Adolphe Quetelet babecabanga ukuthi izihlambi zemeteor ziyizinto ezisemkhathini. AmaLeonids yizihlambi zemeteor ezenzeka njalo ngoNovemba, ikakhulukazi ezishubile uma ziqhathaniswa nezinye izihlambi zemeteor. Ngenxa yalokhu kube nengxoxo yangempela ngesimo sezinkanyezi zokudubula.
Ngemuva kwezifundo ezahlukahlukene, izazi zezinkanyezi zaseMelika uDenison Olmsted, u-Edward Herrick, noJohn Locke ngokuzimela baphetha ngokuthi izihlambi zemeteor zabangelwa yi izingcezu zendaba umhlaba ohlangabezane nazo zihamba ukuzungeza kwawo minyaka yonke zizungeze ilanga. Eminyakeni ethile kamuva, ezinye izazi zezinkanyezi yizo ezathola ukuxhumana phakathi kwemizila yezinkanyezi ezinomsila kanye nemvula yezulu. Ngale ndlela, kungenzeka ukuqinisekisa ukuthi umzila wamazwana we-Tempel-Tuttle uhambelana ncamashi nokuvela kwamaLeonids. Nakhu ukuthi imvelaphi yemvula ye-meteor yaziwa kanjani. Kwakwaziwa ukuthi lezi zihlambi zamazulu zazingelutho ngaphandle kokuhlangana kweplanethi yethu nezinye izinsalela ezashiywa yizinkanyezi ezinomsila ezinemizila yazo eyayisondeza elangeni.
Ama-Comet kanye nama-Meteor Showers
Umqondo wenkanyezi eyaziwa ngokuthi ama-Perseids unomsuka wayo kuzinkanyezi ezinomsila nakuma-asteroid. Ama-Asteroid yizinto nazo ezisohlelweni lwelanga njengamaplanethi enza. Lezi yizicucu ezihehwa amandla adonsela phansi afakwa yilanga futhi izinsalela zasakazeka ngohlobo lothuli oluzungeza umzila. Uthuli lwakhiwa izinhlayiya ezihlukene ezinosayizi abehlukene. Kukhona ezinye izingcezu ezinosayizi omncane kakhulu ngaphansi kwe-micron, yize kukhona futhi ezinosayizi owaziwayo.
Lapho kushayisana nomkhathi womhlaba ngejubane elikhulu, ama-molecule asemkhathini a-ionized. Kulapha lapho kwenziwa khona umkhondo wokukhanya owaziwa njengenkanyezi yokudubula. Uma sihlaziya icala lamaPerseid, siyabona ukuthi afinyelela ijubane lamakhilomitha angama-61 ngomzuzwana lapho ehlangana nomhlaba wethu. Hlala wazi ukuthi, ukuze inkanyezi yokudubula ibonakale kakhulu, kufanele ibe nejubane eliphakeme. Ngaleyo ndlela, ijubane liphakeme, kukhula ukukhanya kwe-meteor.
I-comet enikeze ama-Perseids yi-109P / Swift-Tuttle, itholakale ngo-1862 nangobubanzi obusondele ku-26 km. Isikhathi esithatha inkanyezi enomsila ukuhamba umjikelezo waso okweqanda uzungeza ilanga kwaziwa ukuthi cishe siyiminyaka eyi-133. Kwagcina ukubonwa ngo-1992 kanti izibalo zesayensi zithi izodlula eduze kweplanethi yethu ngonyaka ka-4479. Isizathu sokukhathazeka ngalokhu kusondela ukuthi ububanzi bayo bungaphezu kokuphindwe kabili kunalokho kwe-asteroid okucatshangwa ukuthi yikhona okuqothule. yama-dinosaurs.
Uwabona kanjani ama-Perseids
Siyazi ukuthi lesi sihlambi semeteor siqala umsebenzi waso maphakathi noJulayi futhi siphela maphakathi no-Agasti unyaka nonyaka. Umsebenzi ophelele uqondana nomkhosi weSan Lorenzo ngomhlaka 10 Agasti. Okukhazimulayo yindawo lapho inkanyezi yokudubula ingabonakala khona kakhulu. Kulokhu, iphuzu emkhakheni wezulu lamazulu lapho kuvela khona inkanyezi yokudubula lisenkanyezini yePaleseus.
Ukuze ubuke lokhu kugeza kwe-meteor, akukho thuluzi elidingekayo. Ukubukwa okuhle kakhulu kungenziwa ngeso lenyama, noma ngabe udinga ukukhetha indawo ehlangabezana nezimo ezithile. Into esemqoka ukuthi ube kude nanoma yikuphi ukungcola okuncane, izihlahla nezakhiwo ezenza kube nzima ukubona isibhakabhaka ebusuku.
Kufanele uqiniseke ukuthi inyanga iphansi emkhathizwe, ngaphandle kwalokho singathola izinkanyezi zokudubula. Isikhathi esifaneleke kakhulu salokhu kungemva kwamabili.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamaPerseid, izici zawo nokuthi uwabona kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ama-Perseids